Feature June 7, 2019
မိုးဦး ကျပြီ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးဦးကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှ ဇွန်လကုန်အထိဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများသို့ မေလ တတိယပတ်ထဲတွင် မုတ်သုံ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမားတို့ မိုးစပါးရာသီလည်း စတင်လေပြီ။ “ထွန်စက်ခက နှစ်သောင်း၊ ပျိုးနုတ်ခက လေးသောင်း၊ ကောက်စိုက်ခလေးသောင်း၊ နေ့စားခ ငါးသောင်း၊ ဓာတ်မြေဩဇာက ငါးသောင်း...
Feature June 4, 2019
နံနက်ခင်း ထွက်ပေါ်လာသောနေနှင့်အတူ ဦးအောင်ဝင်းတစ်ယောက်လည်း ပေါက်ပြားတစ်လက်ထမ်းကာနေအိမ်မှထွက်လာသည်။ သူ၏ လုပ်လက်စအလုပ်ဖြစ်သော ရေတွင်းတူးရန် ပေါက်ပြားထမ်း၍ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးအောင်ဝင်းသည် ဇနီးသည်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် တစ်ပင်လဲမူတစ်ပင်ထူသည့်စကားပုံအရကော့ခပုံကျေး ရွာနေ ဒေါ်အေးမူနှင့်အိမ်ထောင်ကျကာ သား (၃) ဦးနှင့် သမီး (၁) ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ ယင်းပြင် ယခင်အိမ်ထောင်မှပါလာသော အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်လည်းပါ လာခဲ့ပြီး အတူတကွနေထိုင်နေကြပါသည်။ ဦးအောင်ဝင်း၏...
Feature June 3, 2019
မွန်ပြည်နယ် စည်ပင်သာရေး ဥပဒေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြဌာန်းခဲ့သည်မှာ နှစ်နှစ်ပြည့်လုနီးပါးရှိခဲ့လေပြီ။သို့သော် ယင်းဥပဒေကား ယနေ့တိုင် အသက်မဝင်သေး။ တတိယ အကြိမ်မြောက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး အတည်ပြုခဲ့သော စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ တွင် အခန်းပေါင်း (၂၁) ခန်း၊ ပုဒ်မပေါင်း ၁၀၅ ခုအထိ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြင်ဆင်မွမ်းမံ...
“သမီးအတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ ချုပ်ဖို့ အထည်စက ၁၈၀၀၀ ၊ ချုပ်ခကတစ်စုံ ၅၀၀၀ နှုန်းနဲ့ နှစ်စုံ ၁၀၀၀၀၊ကျောပိုးအိတ်က ၃၀၀၀၀ ၊ ခေါက်ထီးက၁၀၀၀၀၊ ဖိနပ်က … နောက်” လက်ချိုးရေတွက်ပြရင်း ယနေ့ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို သူမ ဆက်တွက်မပြတော့ချေ။ “ကုန်စရာလေးတွေ နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်”...
Feature May 23, 2019
ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီး က မော်တော်ကား တစ်စီးကို အလုအယက်ဖျက်ဆီးနေသည်။ နေအိမ်တချို့ပေါ်တက်ပြီး ပစ္စည်း ယူရန်(သို့မဟုတ်)ဖျက်ဆီးရန် အတင်းဝင်ရောက်ကြလေသည်။ ထိုသူတို့ ၏ ဒေါသကို မည်သည့်အရာက စလိုက်လေသနည်း။ ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်စုကိုအား ထိုသိုပြုမှုရန် စတင်လိုက်သည့် အကြောင်း အရာက Online လေလံစုမဲ ဟုဆိုသည်။ ရေးမြို့နယ်၊ လမိုင်းမြို့တွင်...
ယခုနှစ် ၂၀၁၉ ဧပြီ ၁ ရက်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရှိသော လူဦးရေမှာ ၅၄ ဒသမ ၁၀ သန်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းလူဦးရေကို အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့် အရေအတွက်ပင်။ ပြီးခဲ့သည့် ပညာသင်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အထက်တန်း ၊ အလယ်တန်း ၊...
Feature May 14, 2019
ရန်ကုန်ကဲ့သို့ မြို့ကြီးများတွင်ပင် လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရ၍ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်ပွား ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်မျိုး ကြုံတွေ့လာရပြီးနောက် လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ပြင်ပကမ္ဘာတွင် ခွေးရူးကိုက်ခံရခြင်းနှင့် လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံခြင်း ပြဿနာကို ပြည်သူများအနေနှင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့် လာကြသည်။ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ တချို့က လမ်းဘေး ခွေးလေခွေးလွင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကြိုးပမ်းနေသော်လည်း ယင်းပြဿနာမှာ...
မော်လမြိုင်မြို့၏ နာမည်ကျော် ဒူးရင်း၊ ကြက်မောက်၊ကျွဲကော စသည့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာ ဥယျာဉ်ခြံများ သည်ကား ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းနှင့် အပန်းဖြေစရာ နေရာများအဖြစ် ပြောင်းလဲနေသည်။ ယခင်တခေတ်ကလည်း ဥယျဉ်ခြံများ နေရာတွင် ရာဘာစိုက်ခင်းများ မင်းမူခဲ့သောကြောင့် မွန်ပြည်နယ် ဥယျာဉ် ခြံမြေလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်သည်ကား ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ မော်လမြိုင်မြို့ ဂွေးကုန်းရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘိုးဘွားများ...
Feature April 3, 2019
By ကောကော် / Myanmar Now 3/04/2019 ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့မှ စတင်ပြီး ကန်ခုနှစ်ဆင့်အနီးရှိ လမ်းတစ်လျှောက် ဒေါတမကြီးရွာသို့ သွားရာ လမ်းသည် ကတ္တရာခင်းထားသည့်အတွက် လမ်းကြမ်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ သို့သော် တောင်တက် တောင်ဆင်းလမ်းဖြစ်သဖြင့် အကွေ့အကောက် များလှပေသည်။ လမ်းမကြီးဘေးရှိ တောင်တန်းများမှာ သစ်ပင်များ၊ ချုံနွယ်များ ထူထပ်လျက်ရှိပြီး...
Feature March 27, 2019
ထိုက်ထိုက်၊ တေဇ မော်လမြိုင်မြို့ ဘိုကုန်းရပ်ကွက် အောက်လမ်းမကြီးရှိ သံလွင်စျေး ငါးဒိုင်ကို ယခုလအတွင်း ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့်ကိုလည်း အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုကြောင်း ပြန်လည် ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းကျော်လွင်က မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် ဟင်္သာသို့ ပြောကြားသည်။ လက်ရှိ သံလွင်စျေးပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်...
1...345...1818 ၏စာမျက်နှာ 4